Iyo kugadzirwa kweTatu eccentric butterfly vharafu
Katatu eccentric shavishavi vharuvhu, inozivikanwawo setatu kukanzura shavishavi vharuvhu, ndeimwe mhando yepamusoro yekuita shavishavi mavharuvhu, akagadzirirwa mashandiro emamiriro ekumanikidza, tembiricha yakakwira, uye akakwirira maficha ekuvhura nekuvhara. Concentric rabha mudungwe shavishavi vharafu, pamwe vakura magadzirirwo uye ma ...
Butterfly vharafu bvunzo uye kugadzirisa: 1. Iyo butterfly vharuvhu ibhuku, pneumatic, hydraulic, uye yemagetsi chinhu icho chakanyatso kubviswa debug usati wabva mufekitori. Kana uchitarisa iko kwekuisa chisimbiso mashandiro, mushandisi anofanira zvakaenzana kugadzirisa mativi ese ekupinda uye yekubuda, vhara iyo b ...
Nheyo yekushanda yeatatu eccentric simbi yakaoma chisimbiso butterfly vharafu: Kune katatu eccentric simbi yekuvhara sevhifuru mavharuvhu, kuwedzera kune maviri eccentricity yevhavha yemidziyo uye iyo vharafu ndiro, iyo yekuisa chisimbiso pamusoro peiyo vharafu ndiro uye iyo vheji chigaro chiri mune chimiro chebliququ ...
Globe vharuvhu iri kushanda, ese marudzi evhavha zvikamu zvinofanirwa kunge zvakakwana uye zvisina kusimba. Bolts pane flange uye bracket yakakosha. Thread inofanirwa kuve isina kusimba uye hapana kusunungura kunotenderwa. Yekusimudzira nati pawhewheel, kana ikawanikwa yakasununguka inofanirwa kusimbiswa munguva, kuti isapfeke kubatana kana l ...
(1) chimiro chevhavha yepasi rose chiri nyore pane vharuvhu yesuo, uye kugadzira uye kugadzirisa zviri nyore. (2) iyo yekuisa chisimbiso pamusoro hazvisi nyore kupfeka uye kukwenya, kuiswa chisimbiso kwakanaka, kuvhura nekuvhara pakati pevhavha yevhavha uye vharafu yekuvhara muviri pamusoro isina kuitsvedza, ...
Kuenzanisa kwezvakanakira nekukanganisa kwemagetsi emagetsi nemagetsi emagetsi, musiyano uripo pakati pemagetsi emagetsi nemagetsi emagetsi.
Magetsi vharafu Magetsi vharuvhu maatomu anonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zvemagetsi kana magetsi enyukireya, nekuti iyo yepamusoro-yekumanikidza mvura sisitimu inoda inotsvedzerera, yakagadzikana uye inononoka maitiro. Iwo mabhenefiti makuru eactuator emagetsi kugadzikana kwepamusoro uye kuramba uchisundira izvo vashandisi vanogona kushandisa. Kunonyanyisa T ...
Hunhu nokuchengetedza mavharuvhu
1.Kuumba: Iyo inzira yekugadzirisa iyo inoshandisa kugadzira michina yekushandisa kumanikidza kune simbi isina mabhii ekugadzira deformation yepurasitiki kuti iwane kukanganwirwa nemamwe michina zvivakwa, mamwe maumbirwo uye hukuru. 2. Chimwe chezvinhu zviviri zvikuru zvekugadzira. Kuburikidza nekugadzira, iyo se-cast ...
Hunhu hweKukanda mavharuvhu
Kukanda mavharuvhu mavharuvhu akagadzirwa nekukanda. Kazhinji, kumanikidzwa kuyerwa kwemavharuvhu kwakadzikira (senge PN16, PN25, PN40, asi kune mamwe akanyanya-kumanikidza, ayo anokwanisa kusvika 1500Lb, 2500Lb), uye mazhinji mairi calibers ari pamusoro peDN50. Ndokugadzira mavharuvhu ndokugadzira uye kazhinji u ...
Batch Yeakakura Saizi Gedhi Valve yakagadzirira Kutumirwa
Hombe saizi yakakandwa esimbi magedhi mavharuvhu akagadzirira kutumirwa. Zvinotora China-Europe chitima kuenda kuEurope. Yakakura saizi Cast Iron Gate Valve inoshandiswa zvakanyanya mutsetse mukuru wekupa mvura, indasitiri yemvura, mvura yekupa uye dhayera, kurapwa kwemvura tsvina, dhorobha system yekupa mvura. Simbi yakagara pasi ...
Kururamisa kuiswa kwevhavha gaskets
Kuti uve nechokwadi chekuiswa chisimbiso kweiyo vharuvhu pombi system, mukuwedzera pakusarudza yakakodzera yekuisa chisimbiso zvinhu, zvinodawo kuisa gasket nenzira inotevera inotevera: Iyo gasket inofanirwa kuiswa pakati petambo, iyo inonyanya kukosha papfudzi. flanges; kuve nechokwadi ...
Iko mashandiro uye hunhu hwekuyerera-kudzikamisa cheki vharuvhu
Yakaiswa panopinda pombi yemvura, iyo LH45-16 yakateedzana kuyerera-inodzora cheki vharuvhu inonyanya kushandiswa mune sisitimu iyo mapombi mazhinji akabatana muparutivi uye huwandu hwezvikwata zvinoshandurwa pakuchinja kuyerera. Ridza basa rekudzikisira kuyerera kwepombi nekusimbisa musoro. Iyo d ...
Iyo nzira yekugadzira hunyanzvi muvharuvhu indasitiri, yakasanganiswa vharuvhu kudzora
Nekukurumidza uye nekukurumidza kumhanya kwemazuva ano uye kwemaindasitiri munyika medu, indasitiri yevhavha iri kuramba ichikura, uye minda yekushandisa iri kuramba ichiwedzera. Mukugadzirwa kwemaindasitiri mazhinji, mavhavha akakosha maindasitiri emidziyo. Zvinopisa ...